KANDIDA DEPIOTE IHOSY : Tratran’ny mpifaninana taminy nangala-bato i Nepatraiky Rakotomamonjy
Kandida iray nilatsa- kofidiana tamin’ny fifidianana depioté lasa teo, no velon-taraina mahakasika ny hosoka sy ny tsy fanarahan-dalana nataon’ny kandida tsy miankina, laharana fahafito, Nepatraiky Rakotomamonjy. 12 juin 2019
Raha ny fanazavana, fantatra fa nampiasa fitaovam-panjakana sy nampiasa olom-panjakana tao amin’ny distrika Ihosy nandritry ny fampielezan-kevitra ary nandritry ny fifidianana io kandida io. Ankoatr’izay, nanao hosoka tamin’ny fifidianana io kandida depioté laharana fahafito ao Ihosy io. Azon’ireo kandida mpifaninana taminy sary ny fanovam-bato nataony. Tratra teo am-panovana ny “process verbal” io kandida io sy ny ekipany.
Tao anaty kaominina miisa telo tao amin’ny distrika Ihosy, nahazo salan’isa hatrany amin’ny 97 isan-jato vokatry ny hosoka nataony ny kandida Nepatraiky Rakotomamonjy. Marihina anefa fa tao amin’ny ankamarohan’ny birao fandatsaham-bato izay vita fanaraha-maso tsara, tany amin’ny laharana fahenina mba tsy hitenenana hoe gisitra no nisy ny kandida laharana fahafito, Nepatraiky Rakotomamonjy. Ny tena tsy leon’ny vavonin’ireo mpifaninana amin’ity kandida ity dia ny fampiasan’izy ireo ny fahefam-panjakana.
Tapitra nozarain’ity kandida ity vola avokoa mantsy ny sefom-pokontany, ny lefitry ny ben’ny tanana, ny olon’ny Ceni sasantsasany tany an-toerana. Manginy fotsiny etsy andaniny ny fampiasana ny moto sy fiaram-panjakana nandritry ny fotoan’ny fampielezan-kevitra sy ny fotoam-pifidianana. Nisy mihitsy koa aza ny fanilihina an’ireo delegé mpanara-mason’ny fifidianana avy amin’ireo kandida hafa tao amin’ny birao fandatsaham-bato tao amin’ny kaominina Mahasoa, Menamatiloto. Nahiliky ny ekipan’I Nepatraiky Rakotomamonjy tao amin’ny efitrano fandatsaham-bato ireo delegé mpanara-maso ireo, ka izy sy ireo ekipany no nanao izay danin’ny kibony.
Manoloana izao tranga izao, nitondra fitarainana teny anivon’ny Ceni sy nitory teny anivon’ny Hcc ny kandida mpifaninana amin’I Nepatraiky Rakotomamonjy. Mangataka ny mba hamafana ny anaran’ireo kandida nanao hosoka sy ny mba handraisan’ny Hcc ny andraikiny ireto olona nahatratra mpangala-bato ireto. Matoky tanteraka ny fahendren’ny eo anivon’ny Ceni fa indrindra ny Hcc ireo lasibatry ny hala-bato. Marihina mantsy fa mitarika eo amin’ny laharana voalohany vokatry ny halatra bevava nataony I Nepatraiky Rakotomamonjy tamin’ity fifidianana depioté ity. Tsy ho afa-maina anefa ny mpangalatra ary ny voka-pifidianana ofisialy tsy mbola nivoaka rahateo.